Wargeyska Wall Street Journal (WSJ), Maamulka Jasiirada Green Land o Trump u sheegay in aanay Iib ahayn Jasiiradoodu | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wargeyska Wall Street Journal (WSJ), Maamulka Jasiirada Green Land o Trump u...
Wargeyska Wall Street Journal (WSJ), Maamulka Jasiirada Green Land o Trump u sheegay in aanay Iib ahayn Jasiiradoodu
Mas’uuliyiinta jasiiradda Greenland ayaa sheegay “inaysan iib ahayn” ka dib markii uu dhawaan madaxweyne Donald Trump sheegay in uu jeclaan lahaa in Mareykanku uu iibsado Jasiiraddaas oo ah tan ugu weyn caalamka.
Green Land , oo dhul ahaan uu u leeyahay waddanka Denmark, ayaa ku taalla inta u dhaxeysa Waqooyiga badweynta Atlantic iyo Arctic.
Waxaa soo baxay warar sheegaya in madaxweynaha Mareykanka uu arrinta ku saabsan iibsashada jasiiraddaas uga hadlay kulan uu la yeeshay la taliyeyaashiisa.
Laakiin dowladda ka arrimisa Greenland ayaa gaashaanka u daruurtay fikraddaas, waxayna tiri: “Annagu ganacsi ayaan diyaar u nahay, balse diyaar uma nihin in nala iibsado”.
Qorshaha madaxweyne Trump ayaa waxaa sidoo kale ku gacan seyray siyaasiyiinta dalka Denmark.
“Koley hadalkaas waa mid loogu tala galay maalinta beenta ee Abriil, balse mar hore ayaaba laga soo gudbay bishaas”, sidaas waxaa bartiisa Twitter-ka kusoo qoray Ra’iisul wasaarihii hore ee Denmark Lars Lokke Rasmussen.
Wargeyska Wall Street Journal (WSJ), oo markii ugu horreysay soo tabiyay warkan ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu dhab ka yahay qorshahaas.
Hase yeeshee, waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in Madaxweyne Trump uusan ka hadlin iibsashada Greenland.
Ra’iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen, oo xafiiska la wareegtay sanadkan gudihiisa ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho arrintan.
Arrinta ku saabsan iibsashada Greenland waxay markii ugu horreysay soo baxday sanadihii 1860-meeyadii, xilligaas oo uu mareykanka madaxweyne ka ahaa Andrew Johnson.
Sanadkii 1867-kii, warbixin kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Greenland ay tahay dhul muhiim ah, sidoo kalena leh kheyraad badan oo dabiici ah.
Warbixintaas ayaa lagu soo jeediyay fikradda ah in Mareykanku uu iibsado jasiiraddan istiraatiijiga ah.
Hase ahaatee, ma jirin tallaabo rasmi ah oo la qaaday ilaa laga soo gaaray sanadkii 1946-kii, markaasoo madaxweynihii Mareykanka ee lagu magacaabi jiray Harry Truman uu Denmark ugu yaboohay $100 malyan oo doolar, si uu uga iibsado jasiiraddan.
Horay wuxuu madaxweynahaas qudhiisa si kaftan ah u sheegay in meelo muhiim ah oo ka tirsan jasiiradda Greenland uu ku baddalan doono gobolka Alaska, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP.
Previous articleDaawo Gobolka taleex Odayaashiisii iyo aqoontiisii oo digniin culus u diray Maamulka Butland dal balaadhsiga ay wadaan Fariin kalen u diray somaliland
Next articleGudoomiyaha Baanka Dhexe Cali Baqdaadi Oo Fooqyo Waa Weyn Ka Dhisanaya Magaalada Hargeysa+Sawiro